China Black Door Handle mkpọchi maka ụmụaka Ime ụlọ na rụpụta | YALIS
Black Door Aka mkpọchi maka Children Room
Mortise: mkpọchi mkpọchi ọkọlọtọ EURO
Nnu raygba Nnu: 72-120 awa
Nyocha nke Cycle: Oge 200,000
Ọnụ ụzọ ọkpụrụkpụ: 38-50mm
Ngwa: azụmahịa na ebe obibi
Nkịtị Mmecha: Matt nwa
Oge Mbuga ozi: Daysbọchị 35 mgbe ịkwụ ụgwọ
Tụkwasịnụ Ikike: 50000 Ibe / iberibe kwa ọnwa
Kwụ Tergwọ Okwu: T / T, L / C, Kaadị akwụmụgwọ
Maka ezinụlọ, ụlọ ịsa ahụ bụ ohere a na-ejikarị eme ihe. Otú ọ dị, ụlọ ịsa ahụ bụkwa ebe kachasị nwee ihe ọghọm, na ihe mberede dịka ịda na ntụ na-eme site n'oge ruo n'oge. Ndị òtù ezinụlọ (ọkachasị ụmụaka na ndị agadi) na-agbachi na ime ụlọ ịsa ahụ na-akpachapụghị anya, na-enwekarị ihe egwu dị omimi.
Site na echiche mmadụ, YALIS na-eleba anya n'ihe mgbu nke onye ahịa ọ bụla chiri anya, na-agbaso mkpa ahịa, ma na-ebupụta usoro mkpọchi ọnụ ụzọ ụlọ ịsa ahụ ọhụrụ. Enwere ike ịmeghe mkpọchi ọnụ ụzọ ụlọ ịsa ahụ n'èzí iji zere nsogbu dị ka ndị agadi na ụmụaka na-amị amị ma na-ada n'ime ime ụlọ ịwụ ma ghara ịnapụta ha n'oge. Mkpọchi ọnụ ụzọ ụlọ ịsa ahụ YALIS ga-anwa ị nweta oge maka ichebe ezinụlọ gị.
Si ihe nhọrọ, nkà ịrụ, àgwà akara, na mgbe-sales ọrụ, anyị na-agbalịsi ike izu okè. Ebumnuche nke YALIS bụ iji nye ndị ahịa otu ihe ngwaike nke ụzọ dị mfe, dị mfe ma dịkwa mma. Na 2021, YALIS ga-aga n'ihu were "iguzosi ike n'ezi ihe na ihe ọhụrụ" dịka isi nke ụlọ ọrụ ahụ, na-aga n'ihu na-eme ka mgbanwe dịwanye omimi, ma weta ụzọ ụzọ YALIS n'akụkụ ụwa niile iji jeere ọtụtụ puku ndị ahịa ozi.
Nke gara aga: Matt Black Childproof Door Aka mkpọchi
Osote: Safetyzọ Safetylọ Nche ụmụaka
Q: Gịnị bụ YALIS Design?
Azịza: YALIS Design bụ ihe na - eduga maka ngwaike ngwaike ngwangwa.
Q: Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume ịnye ọrụ OEM?
A: N'oge a, YALIS bụ akara mba ụwa, yabụ na anyị na-emepe ndị ahịa ahịa anyị niile maka usoro a.
Q: Ebee ka m nwere ike ịhụ ndị na - ekesa ngwa ahịa gị?
A: Anyị nwere onye nkesa na Vietnam, Ukraine, Lithuania, Singapore, South Korea, Baltic, Lebanon, Saudi Arabia, Brunei na Saịprọs. Anyị na-emepekwa ndị ọzọ na-ekesa ahịa na ahịa ndị ọzọ.
Ajụjụ: Kedụ ka ndị enyemaka gị ga - esi nyere gị aka n’ahịa?
1. Anyị nwere ndị ahịa na-ere ahịa maka ndị na - ekesa anyị, gụnyere imewe ngosi ihe ngosi, imepụta ihe eji akwalite, nchịkọta ozi ahịa, nkwalite ntanetị na ahịa ndị ọzọ
2. Ndị otu anyị na-ere ga-aga ahịa maka nyocha ahịa, maka mmepe ka mma na omimi n'ime obodo.
3. Dị ka akara mba ụwa, anyị ga-esonye na ngosipụta ngwaike ndị ọkachamara na ngosipụta ụlọ, gụnyere MOSBUILD na Russia, Interzum na Germany, iji wuo akara anyị na ahịa. Ya mere ika anyi gha enwe aha di elu.
4. Ndị na-ekesa ihe ga-ebute ụzọ maka ịma ngwaahịa ọhụrụ anyị.
Ajụjụ: Enwere m ike ịbụ ndị nkesa gị?
A: Dị ka ọ na-adịkarị, anyị na-akwado ndị egwuregwu TOP 5 n'ahịa. Ndị egwuregwu ahụ nwere otu ọrịre tozuru etozu, ọwa ahịa na ọwa nkwalite.
Q: Kedu ka m ga - esi bụrụ onye nkesa gị n'ahịa?
A: Knowingmara ibe gị dị mkpa, biko nye anyị atụmatụ gị maka nkwalite akara nke YALIS. Ya mere na anyị nwere ike ikwurịta banyere ohere ọ ga - abụ naanị onye nkesa. Anyị ga-arịọ maka ịzụrụ ihe kwa afọ maka ịdabere na ọnọdụ ahịa gị.
Lọ Mgbaaka athlọ Mgbaaka
Lọ ịsa mkpọchi Handl
Childproof Door ahụ
Nzuzo uzo uzo
Shozọ orzọ Aka
Igodo mkpọchi ụzọ ụzọ Chrome
Safetyzọ Safetylọ Nche ụmụaka
Childproof Door ahụ na latch mkpọchi
Black Now Child Safety Door emefu na mkpọchi
Matt Black Childproof Door Aka mkpọchi
Igodo mkpọchi ụzọ eji emeghe ọnụ ụzọ